Nezvedu | Brocade Smart Space Technology Co, Ltd.
Brocade Smart Space Technology Co, Ltd.yakanyoreswa kiyi bhizinesi muSichuan Province, China, uye iri chikamu chechirongwa chikuru chekudyara cheiyo High Tech Zone muChengdu. Zvigadzirwa zvedu zvinonyanya kusanganisira yakakwira-tsananguro vhidhiyo switch uye vagoveri, uye yakakwira-tsananguro kurasikirwa kure-kure-chaiko-nguva yekufambisa zvigadzirwa. Zvinhu zvedu zvinowanzo shandiswa muHDMI odhiyo-inoona indasitiri uye yekudzidzisa kwakawanda, vhidhiyo misangano, hombe-skrini kuratidza, kuratidzira, kwesainzi, uye iyo firimu neterevhizheni yekupfura munda. Chikamu chedu chekutanga kudyara iri RMB mazana mashanu emamirioni, iine huwandu hwekudyara hwakazosvika kuRMB mabhiriyoni maviri.
Sevashandi-vevaridzi veBrocade AI Boka, isu tine indasitiri-inotungamira yakazvimiririra tekinoroji, zvigadzirwa zvakagadzirwa zvehunyanzvi, uye yakakura R&D kugona - nezvinhu zvedu zviri kugadzirwa pamusoro pemitsara gumi yekugadzira kuve nechokwadi chekuparadzirwa kwevashandisi pasirese. Yedu nyanzvi timu inokwanisa kubata yakasarudzika OEM odha dzevatengi uye isu tinogona kushanda neakakura uye madiki eodha yakawanda.
Brocade Boka, murapi wehupfumi hwedigital, Brocade Group inomiririra mabhizimusi eChengdu muSichuan Province Sichuan Bhizinesi Musangano uye chirongwa chikuru chekusimudzira mari muChengdu High-tech Zone. Alibaba Cloud yakabvumidza zviri pamutemo shamwari yemuchadenga. Zvichienderana netekinoroji uye zvine hungwaru kudyara, tarisa kuvandudzwa kwesoftware uye matekinoroji ehunyanzvi akadai seanogadzira zvigadzirwa, hombe dhata system software, Internet yezvinhu, nezvimwe, kodzero dzakazvimiririra dzepfuma dzimba munzvimbo dzepakati, uye kuburikidza neenzvimbo yepamusoro uye yakadzika yeindasitiri cheni. marongero, zvinoenderana nemaguta akangwara, dzidzo yehungwaru, Smart tsika nemasikirwo, smart space, smart emergency, smart finance nemamwe madiki-eminda ekuda kwemusika kugadzira zvigadzirwa zvine chekuita nemasevhisi, uye kuvaka yekutanga-kirasi yekuvandudza bhizinesi nehungwaru hwekunyepedzera. indasitiri ecosystem.
Brocade Boka inonamatira kune yekambani tsika yehunyanzvi, hunyanzvi, pragmatism uye kuvimbika, uye yakaratidza kumisikidzwa kumisikidzwa kwe "nyika dzepasi rose, mapuratifomu, kuita kwemaindasitiri uye ecologicalization", ine chinangwa chekuvaka yekutanga-kirasi yekuvandudza bhizinesi.
Tekinoroji yekuvandudza, manejimendi ekuvandudza, inotungamira ramangwana
Tsvaga chokwadi kubva kuzvokwadi, dzidzira wega, uye shanda nesimba
Kurumidza uye kunyatsoita, kubatana, peta mhedzisiro nehafu yekuedza
Wakavimbika uye wakavimbika, unowirirana kunze nekunze, kuvimba nenyika
Dr. Sha Guo Artificial Intelligence Nyanzvi, Sachigaro weboka
Vakapedza kudzidza kubva kuTsinghua University (Bachelor uye Master) uye FIU (Ph.D.) muUnited States. Mudzidzisi wake ndiPurofesa Sun Jiaguang, mudzidzi weChinese Academy yeSainzi. Dr. Sha Guo inyanzvi hombe yedata uye akaburitsa angangoita makumi matatu mapepa ezvidzidzo mumadhorobha epamusoro epasi rese nemisangano yakaita seIEEE. Tarisa pane huchenjeri hwekunyepedzera, hombe dhata uye mashandisiro aro uye hunyanzvi. Iine anopfuura makore makumi maviri emakore evatungamiriri vakuru uye ruzivo rwekushanda mumakambani epasi rose, muvambi weNUCOM, anonyanya kuzivikanwa weAmerican telecom opareta, anotengesa pagore anodarika mamirioni zana emadhora ekuAmerica. Akamboshanda kuIBM Research Center muUnited States, raive boka rekutanga revanamuzvinabhizimusi muindasitiri yeInternet, uye zvakare mubatsiri wemasangano mazhinji emari.
Hao Fang, Boka CEO
Akapedza kudzidza kubva kuYunivhesiti yePeking, akatanga uye akaisa mari mumakambani mumaindasitiri mazhinji, uye ane makore makumi maviri nerimwe emabhizimusi ebhizimusi uye ruzivo rwekutungamira bhizinesi, kusanganisira dzidzo, dhizaini dhizaini, hunyanzvi hwekugadzira, hunyanzvi hwepamusoro, kutengeserana nedzimwe nyika, nezvimwe.
Mumakore ekuma1990, akashanda kuChina Electronics Ruzivo rwekuvandudza indasitiri Yekutsvagisa Institute yeInstitute of Information and Information Technology semusoro wekugadzira dhizaini. Akavamba French SACAVIN Knights uye Peking University Philharmonic Club.
Kunzwisisa Brocade Boka
Mikana Yese kwauri
Zvichienderana netekinoroji uye zvine hungwaru kudyara, tarisa pakutsvagisa nekusimudzira kwesoftware uye matekinoroji ehunyanzvi senge zvigadzirwa zvehungwaru uye hombe dhata system software mapuratifomu, tenzi akazvimirira ehungwaru kodzero dzenzvimbo munzvimbo dzepakati, uye kuburikidza nekumisikidzwa kwemakomo akadzika uye ezasi emakambani emaketani, zvinoenderana nemaguta akangwara, dzidzo yehungwaru, musika wakangwara unodikanwa muminda midiki senge kugadzirwa kwetsika, nzvimbo yakangwara, uye emergency dhijitari kugadzira zvigadzirwa zvine chekuita nemasevhisi, uye kuvaka yekutanga-kirasi yekuvandudza bhizinesi neyakagadzirwa indasitiri yehungwaru ecosystem.
Brocade Artificial Intelligence Group ndiyo inomiririra mumiriri weChengdu mabhizinesi muSichuan Province Sichuan Bhizinesi Musangano uye chirongwa chikuru chekusimudzira mari muChengdu High-tech Zone. Kuburikidza nekuzvimiririra kwehunyanzvi hwetekinoroji yepamoyo, iine zvakanakira zviripo mumaindasitiri zviwanikwa, chiteshi zviwanikwa, uye migero mikuru, misika inodaidzwa, uye mafekitori mafomu senge chinangwa, iro Boka rakaisa hwaro hwakasimba hwekukurumidza kukura uye kuhwina-kuhwina kubatana pamwe nevadyidzani .
Yese mari yekudyara
Brocade inobata kukosha kukuru kune iyo tarenda zano. Kupfuura 95% yeiyo yepakati manejimendi timu yakapedza kudzidza kubva kumayunivhesiti akakosha. Vanopfuura makumi mashanu muzana vari PHDS. Vanopfuura makumi matatu muzana vanodzoka.
Huwandu hwevanachiremba nemasters hausi pasi pe50%
Pasina isingasviki 95% yevadzidzi vane bachelor degree kana pamusoro
Huwandu hwevadzidzi, mapurofesa nevatariri vezvechiremba hausi pasi pe5%
Huwandu hwevanodzoka hahuve pasi pe30%
Brocade Boka ndiye anosaina mumiriri wemakambani eChengdu muSichuan Province Sichuan Bhizinesi Musangano uye chirongwa chikuru chekusimudzira mari muChengdu High-tech Zone. Kuburikidza nekuzvimiririra kwehunyanzvi hwetekinoroji yepamoyo, iine zvakanakira zviripo mumaindasitiri zviwanikwa, chiteshi zviwanikwa, uye migero mikuru, misika inodaidzwa, uye mafekitori mafomu senge chinangwa, iro Boka rakaisa hwaro hwakasimba hwekukurumidza kukura uye kuhwina-kuhwina kubatana pamwe nevadyidzani .